अपरिचित हिन्दु विरामीलाई जोगाउन रमादानको व्रत तोडेर रक्तदान गरे यी मुस्लिम युवाले - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > विविध > अपरिचित हिन्दु विरामीलाई जोगाउन रमादानको व्रत तोडेर रक्तदान गरे यी मुस्लिम युवाले
अपरिचित हिन्दु विरामीलाई जोगाउन रमादानको व्रत तोडेर रक्तदान गरे यी मुस्लिम युवाले
विविध विश्व समाचार
May 17, 2019 May 17, 2019 GRISHI490
यतिखेर सन्सार भरका मुस्लिमहरु पवित्र महिना रमादानको उत्सव मनाइरहेका छन् । व्रत बसिरहेका छन् । यस्तोमा एक मुस्लिम युवकले अपरिचित हिन्दु विरामीको ज्यान जोगाउन आफ्नो व्रत तोडेर रक्तदान गरेका छन् ।
मंगलदोइ जिल्लाका २६ वर्षे पनाउल्ला अहमदले ओ पोजेटिभ रगतको सख्त आवश्यकता भएका धेमाजी जिल्लाका राजन गोगोइका लागि रक्तदान गरेका हुन् ।
हालैको एक बिहान आराम गरिरहेका बेला अहमदले एउटै कोठामा बस्ने साथी तपस भगवतीलाई एकदम चिन्तित पाए । रक्तदाता र विरामीलाई जोड्ने संस्था ‘टिम ह्युमानिटी’ सँग आवद्ध तपसलाई अघिल्लो राति दुई युनिट ‘ओ पोजेटिभ’ रगत अत्यावश्यक रहेको भन्दै फोन आएको रहेछ ।
संस्थासँग करिव २ सय सक्रिय कर्मचारी ९० हजार सदस्य र २५ हजार नियमित रक्तदाता आवद्ध भए पनि अनलाइनमा पटकपटक आह्वान गर्दासमेत रगत जुटाउन नसकेर उनी चिन्तित भएका रहेछन् । तपसले धेरैतिर फोन गरे तर केही पार लागेन ।
‘त्यत्तिकैमा अहमद आए र आफूले रक्तदान गर्ने बताए । मैले उसलाई सोधेको पनि थिइन, त्यसमाथि उ रोजामा थियो,’ तपसले भने । त्यसपछि दुवै गोगोइ भर्ना भएको अस्पतालतिर कुदे ।
यत्तिकै रक्तदान गर्न चाहेका अहमदलाई डाक्टरले त्यसअघि व्रत तोड्न सल्लाह दिए । ‘त्यसबीच अहमदले आफ्नो गाउँ सिपाझारका केही बुढापाकालाई फोन गरेर व्रत तोड्न मिल्छ भनेर सोधे । विभिन्न खाले प्रतिक्रिया आए । र अन्तमा उनी रक्तदान गर्ने निश्कर्षमै पुगे,’ तपसको भनाई छ ।
‘रोजा एक धार्मिक विश्वास हो, जसलाई हामी पछ्याउन चाहन्छौ । मैले यो महसुसका साथ निर्णय गरे कि रोजा त मैले हरेक अर्को दिन पनि गर्न सक्छु तर आज कसैको जीवन जोगाउने एउटा मौका आएको थियो । मैले उनलाई जोगाउन चाहे,’ अहमदले भने ।
काम पनि एकै ठाउँमा गर्ने साथी अहमदले देखाएको मानवताबाट तपस नतमस्तक बनेका छन् । ‘अहमदजस्तो साथी पाउनु मेरो लागि गर्वको कुरा हो । उसले धर्मभन्दा माथि उठेर मानवता रोज्यो,’ तपस भन्छन् । #रमादान# रोजा
फिलिपिन्सले क्यानडालाई भन्यो–आफ्नो फोहोर तत्काल फिर्ता लैजाऊ
संसद बैठकमा प्रयोग गरेको कन्डम भेटिए पछि… !
May 12, 2021 May 12, 2021 Raju Thapa
बेलायतमा देखियो नयाँ स्ट्रेनको कोरोना: संक्रमणको डरले बेलायतमाथी धमाधम हवाई प्रतिबन्ध !
भेनेजुएलामा प्रदर्शनकारीमाथि बख्तरबन्द गाडी गुडाइयो ! आज पनि विरोध प्रदर्शन